निगरानी बढाएका छाैं, कारबाहीबारे छलफल हुँदैछ : शिक्षा मन्त्रालय - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ८ मंसिर २०७८, बुधबार १२:३७
अहिले देशका ठूला राजनीतिक दलहरु नयाँ नेतृत्व चयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन तयरीमा छन् । यसैक्रममा केही दलका महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा शिक्षक तथा अन्य पेशाकर्मी चयन भएका छन् ।
हातमा कलम लिएर कक्षाकोठमा बिद्यार्थीलाई शिक्षण गराउने शिक्षकका हातले कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर राजनीति गतिविधिमा संलग्न हुन थालेपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ ।
कोरोना संक्रमणको दर विस्तारै कम हुदैँ जाँदा विद्यालय भौतिक रुपमा खुलेका छन् तर पढाउने शिक्षकहरु नै राजनीतिमा होमिदा शिक्षा प्रणलीमा असर पर्ने देखिएको छ । यसको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भैरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगको आपत्ती
निर्वाचन आयोगले मंगलबारएक विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, प्रध्यापकहरु प्रतिनिधि समेत बनेको देखिएकाले यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपनल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालबाला प्रध्यापक वा शिक्षकको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
शिक्षविद्को चित्त दुखाई
विभिन्न दलहरुको महाधिवेशनमा शिक्षकहरु महाधिवेशन प्रतिनीधि चयन भएकोप्रति शिक्षाविद्ले गुनासो गरेका छन् । शिक्षाविद् प्रा.डा बिद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक पार्टीको प्रतिनिधि बन्दा शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताउनुभएको छ । ‘शिक्षक पार्टीको सदस्य भएपछि कार्यक्रममा हिड्छन् । शिक्षक खै भनेर बच्चालाई प्रश्न गर्दा उसले आज फलानो व्यक्तिको पार्टीको कार्यक्रममा जानुभएको छ भन्ने उत्तर दिन्छ । यसले उसको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला ?’ उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक पार्टीहरुले सार्वजनिक रुपमै मेरो दलमा शिक्षकको सदस्यता छैन भनेर प्रस्ट रुपमा भन्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यस्तै शिक्षाविद् प्रा.डा.बालचन्द्र लुईटेलले पनि जबसम्म राजनीतिक पार्टीले शिक्षकलाई पार्टीको सदस्ता दिने प्रचलन बन्द गर्दैनन् तबसम्म यही प्रवृत्ती दोहोरीने बताउनुभयो । शिक्षक संगठन शिक्षकको हकहितको लागि लड्नुपर्ने बेलामा राजनीति गर्दै हिड्दा बालबालिकाको भविष्य नै विग्रन सक्ने उहाँको दावी छ ।
शिक्षक राजनीतक पार्टीको सदस्य हुन विधानतः नमिल्ने बताउनुभयो । यदि राजनीतिमा भाग लिएको पाईए शिक्षा नियमावलिमा भएको व्यवस्था अनुसारको शिक्षकलाई कारबाही हुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । कारबाहीको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तो कारबाही व्यक्ति विशेषमा हुने भएकाले शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको आधारमा कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ ।